ကားဈေးတွေ ထိုးကျကုန်ပြီ .. ဖုန်းဈေးတွေလည်း မကြာမီ မျှော်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကားဈေးတွေ ထိုးကျကုန်ပြီ .. ဖုန်းဈေးတွေလည်း မကြာမီ မျှော်..
ကားဈေးတွေ ထိုးကျကုန်ပြီ .. ဖုန်းဈေးတွေလည်း မကြာမီ မျှော်..
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on May 5, 2012 in Myanma News, News | 18 comments
ဒီနေ့ မနက်ပဲ အိမ်းသူသက်ထား ချစ်မယားလေး ရှင်မွေးလွန်းက ပြောတယ်..
ကားစီးချင်ဘီ ကိုကိုရယ်တဲ့.. စိတ်ထဲကတော့ လစာလေး သုံးသောင်းလောက်တိုးတာမှ မကြာသေးဘူး ကားစီးချင်တယ် လုပ်နေဘီပေါ့၊ (ချဉ်ပါတယ်အေ.. ဂယ်ပဲ)
နှုတ်ကနေတော့.. အို ကွယ် တနေ့တော့ စီးရလိမ့်မပေါ့..။ ခုလည်း မော်တော် ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ အဆင်ပြေနေတာပဲဟာ.. လို့ နှစ်သိမ့်လိုက်ရပါတယ် ..ဟီး။
သိန်းထောင့်ငါးရာ ဆုကြီးပေါက်လို့ကတော့ ကားကောင်းကောင်းဝယ်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ အမျိုးတွေအကုတ်လုံး ဘုရားဖူးပို့မယ် မှန်းထားတာ..။ ထီကလည်းမပေါက်။
ကားစီးချင်တယ် ပြောလို့မှ ဆုံးရုံရှိသေး ဟော.. သတင်းကြားဘီ။ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီအောက် ကားများကို ပါမစ်သီးခြားမလိုပဲ လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ အတည်မပြုနိုင်တဲ့ သတင်းကြောင့်တဲ့ ကားဈေးတွေထိုးကျတယ်ဆိုပဲ..။
ရွာစားကျော်တို့ ဆန္ဒပြင်းလို့ သကြားမင်း ပန္တုကမ္ဗလာ မြကျောင်ဖျာ တင်းရော့ထင့်။ ကားဈေးတွေ သိန်း ၃၊ ၄ ဆယ် ကျသွားသတဲ့။ Yangon Press International ရဲ့ ဖေစ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်..။
မေလ ၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ (YPI)
အခြားကားဝယ်ရောင်း တဦးကလည်း ယမန်နေ့ညနေက ကားဈေးကွက်တွင် ဈေး ကျဆင်းသွားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
ယမန်နှစ် လယ်ကစတင်လိုက်သည့် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများ အပ်နှံ၍ ကားအစားထိုး တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် အစီအစဉ်ကြောင့် ဆယ်စုနှစ် တခုကျော်မြင့်တက်ခဲ့သည့် ကားဈေး ၃ ချိုး ၂ ချိုး ကျဆင်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာ ၁ သိန်းရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ ၀င်ငွေခွန်ပေးဆောင် ထားသူ ပြည်ပတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူများ၊ နိုင်ငံခြား သင်္ဘောသားများ ကိုပါ တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ ကားဈေးမှာ တစထက်တစ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။
မပူတော့ဘူးဗျာ..။ သူတကာတွေ ကားစီးတဲ့ အချိန် ကျုပ်တို့လည်း စီးနိုင်သွားမှာပါ။
အောင့်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေ ဖြစ်မှာပဲ။ (မအောင့်နိုင်လည်း ခုချက်ချင်းမှ ကိုယ်က မတက်နိုင်တာ )
ဖုန်းတွေလည်း ဒီထက် ဈေးကျအုံးမှာတဲ့ဗျ။ တသိန်းတန်ဆိုပြီး လာလိမ့်အုံးမယ် သတင်း သဲ့သဲ့ကြားနေတယ်။ အောင့်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေပဲ။ ငါးထောင်ထိ ကျအောင် အောင့်ထားကြပါအုံး။ လွှတ်တော်မှာလည်း အမတ်မင်းတွေ လှုပ်ရှားဘီ၊ အဆိုတင်ထားဘီ ပြောတယ်။ ကားကောင်းကောင်းစီးချင်၊ ဖုန်းဈေးချိုချိုနဲ့ ရချင် အောင့်သာ ထားကြလို့ ပြောချင်ပါရဲ့ဗျာ..။
Burma Thwe's facebook မှ ရပါသည်..
credit: Yangon Press International & Burma Thwe’s facebook
ပိုက်ဆံမရှိတာ ဒီနေရာမှာ ကံကောင်းတာပဲ။
အခုစာကလေးကြော် အခုဆီထမင်းမူဝါဒနဲ့ ချီတက်နေတဲ့ စီးပွားကူးသန်းကြောင့် ခွက်ခွက်လန်ရှုံးတဲ့ထဲ ဒီတခေါက်လဲ ပါမသွားပြန်ဘူး…။
ဦးဦးပါလေရာ ရဲ့ ။
ဘယ်အရာမဆို ( Ref ; ပိုက်ဆံမရှိတာ )
အဆိုးရော အကောင်းပါ ရှိတယ်ဆိုတာ
အဲဒါကို ပြောတာပေါ့ ။
အဲဒါတော့ ထောက်ခံတယ်။ ကား အကြောင်း ပြောရင် အိမ်က ဟာကြီး ပိုက်မိ ထားတာ ရင်နာ လွန်းလို့.. မုန်းလိုက်တာ.. အရမ်းပဲ..
အမှန်အကန်ဈေးထက်ပိုတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင် မှတ်ပုံတင်တောင်မလုပ်ဂျနဲ့ဗျို့ :D
အခုကားဈေးတွေကစီးပျော်တဲ့ဈေးတခုလို့ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက်ထိုက်သင့်တဲ့အခွန်လည်းရတဲ့အတွက် လမ်းတံတားတည်ဆောက်ေ၇းအတွက် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ အရင်ကားဈေးတွေက ဒိထက်အများကြီးမြင့်ပြီး မဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးတွေးပါ။ အဲဒီဈေးတွေတုန်းက နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအခွန်ငွေတပြားမှမရပါ။
လမ်းကောင်းပြီး ကားမကြပ်မှ ကားဝယ်စီးမယ်ဟေ့
အိမ်စီးဆိုပေမယ့် မြို့တွင်းလောက် မောင်းကောင်းမယ့် မီနီစလွန်း၊ စူဇူကီး ၀က်ဂွန်လောက် ကားတွေပဲ ပါအုံးမှာ ဆိုတော့ သိပ်မနိပ်ဘူးထင်တယ်..။ တကယ်တမ်း အကြောင်းကိစ္စနဲ့ ခရီးဝေးခိုင်းချင်ရင် ညှာနေရတာ။ ကြာရှည်သုံး၊ စိတ်ချလက်ချသုံး၊ တော်တော်နဲ့ပြန်မကြည့်ရတဲ့ အမျိုးအစားလေးတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် ပြည်တွင်းငွေလည်း အပြင်သိပ်မထွက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်အောင်သုံးနိုင်တဲ့ ကားတွေ သွင်းရမှာ..။
အလို ။ ဖတ်ရတဲ့ သတင်းက တယ်နိပ်ဗျား။
ထီသွားထိုးပြီဗျို့ ပ်ေက်ရင် တော့ ရွာစားကြီး ကို ပွဲပေးမယ် စိတ်ချ။
ဒို့ ကတော့ ဒို့ ကတော့ ..ဒို့ ကတော့ အမြဲတမ်းပဲကွယ် အောင့်ထားဆဲပါ
မန်းနီးက ဝေးဝေး နေနေဆဲ..
ရို့ .ရို့ …
အေးဗျာ အောင့်ရလွန်းတော့လည်း ဆီးချုပ်၊ ၀မ်းချုပ်ပါ လိုက်လာဘီ ဟီး
အောင့်ခံ ချမ်းသာကွ …. တဲ့ ..
ကြာနီကန် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားထဲမှာ ကြားဖူးတာ ..
ဟုတ်ဗျ .. အောင့်ထားရလွန်းလို့ … အောင့်ထားလို့ ရသမျှ တွေ အကုန် ချုပ်ကုန်ပြီ…။
ရွာစားကျော် တင်တဲ့သတင်းက တကယ့် မင်္ဂလာသတင်းပဲဗျို့…၊
အတည်မပြုနိုင်တဲ့ ဒီသတင်းကြီး အမြန်ဆုံး အတည်ပြုနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်နေရုံမှတပါး
အင်း.. ဖြစ်လာရင်တော့ ရန်ကုန်သားများ လမ်းများများလျှောက်ဖို့ လေ့ကျင့်ထားကြပါ
ဦးဝိစာရလမ်း ချဲ့နေတာ ကားကြပ်တော့မှာ ကြိုမြင်လို့ဖြစ်မယ်..
အိုဘယ့် ဖာရာရီ ….ထွီ …
လစ်ပြီ ကို ရွာစားကျော်ရေ့…….
မေလ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် -(YPI)
မေလ ၇ ရက်နေ့တွင် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တရပ် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပရန်ရှိသဖြင့် သတင်းမီဒီယာများအား ဖိတ်ကြားထားကြောင်း သိရှိရသည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကားတင်သွင်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည်ဟု ယခုလောလောဆယ် ရရှိသည့် သတင်းများအရ သိရသည်။
တကယ်သာဖြစ်လာလို့ကတော့ ၀မ်းသားစရာသတင်းပေမဲ့ လက်ရှိရန်ကုန်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့
ကားပါကင်အခက်အခဲနဲ့ လမ်းတွေမှာကားတွေကျပ်ခဲပိတ်ဆို့နေတဲ့ ပြသနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်
ပဲ ကားသွင်းခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အင်း…ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဖင်မနိုင်ပဲ…ပဲကြီးဟင်းစား